Sida loo joogto ah Delete Songs ka iPhone
"Sidee si joogto ah u tirtirto heeso ka iPhone Waxaa igu dhibeen badan in ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 7, daraasiin songs rabin muuqan on my iPhone innaba iyaga ma tirtiri kartaa Fadlan caawi?..." - Sophia
Ka dib markii lagu casriyeeyo macruufka, qaar ka mid ah goobaha asal aad iPhone laga beddelin. Xaaladdan oo kale, qaar ka mid ah heesaha aad soo iibsatay u badan tahay inay ka muuqdaan aad iPhone adiga oo aan ka filanayaa. Waa dhibaato caadi ah in dad badan ay la kulmeen. Ha welwelin. Qaybta soo socda uu kuu sheegayaa sida aad u joogto ah tirtirto songs rabin ka iPhone. Waxaad ka codsan kartaa sidan haddii aad la kulanto dhibaato la mid ah marka aad casriyeeyo si macruufka 9/8. Fiiri xal hoose.
Tallaabada 1 Disable Lugood Match
Tubada 'Settings' aad screen guriga iPhone> tuubada 'Lugood & App Dukaamada', hoos u hesho fursada 'Lugood Match'. Weerar dadban ku badhanka ag in OFF haddii la karti. Haddii aadan dami Lugood kulanka, si toos ah in aad u soo dejisan iPhone doonaa heeso.
Tallaabada 2 noqda off 'Show All Music'
Qaar ka mid ah heesaha muuqda Music app la Cloud icon yar oo ayan ku jirin? Ok, haddii ay sidaas tahay, waxaad u baahan tahay in la damiyo 'tusiya All Music'. Tubada in app 'Settings "> hoos iyo' Music 'app> Kaadhkaaga' Show All Music 'ka jaftaa in off.
Tallaabada 3 songs Delete ka iPhone
Fur app Music ku saabsan iPhone. Qeybta hoose, ka jaftaa Songs. Hel hees aad rabto in meesha laga saaro, weerar dadban ka xaq u leeyahay inuu ka tagay si ay awood fursad u tirtirto. Tubada "Delete '.
Delete iPhone Data oo aan laga badinin jailbreak
Sida loo Delete xisaab iPad
Sida loo tayo leh oo cad iPhone Memory
Si joogto ah Delete waano on iPhone la SafeEraser Wondershare
Sida loo masixi Data Cell Phone
Sidee si buuxda u masixi SD Card ee Android Phone
Sida loo Delete Qaasaali ka iPhone
Hagaha ugu wanaagsan ee la tirtiro file .ost
Sidee si fudud saar nuqul Songs in Your Big Music Library
> Resource > masixi > Sida loo joogto ah Delete Songs ka iPhone